Gabdhaha geedka raga markey arkaan faruuraha qaniina ee kacsada - iftineducation.com
Gabdhaha geedka raga markey arkaan faruuraha qaniina ee kacsada
iftineducation.com – Waxa marag ma doonto ah, in wakhtiga galmada ay niyad jab wayn ku tahay lamaanaha in midkood uu hore u biyo baxo isagoon qofkii kale gaadhin ahmiyadii () taasoo raga ay dhibaatadani haysato ay anfariir ka qaadan, inay la galmoodan xaasaskooda dhibatadan awgeed, iyagoo isku arka inaanay ahayn nin buuxa.
Run ahaantii taasi waxa aad ogata in xanuunkan premature ejaculation uu yahay ka ugu sahlan ee laga dawoobi karo, qofkana nolosha lamaanihiisu ay ku hagaagi karto.
Isku soo wada duuboo, dhibaaatada ugu wayn ee ka iman kartaa waxa weeye inaad qancin kari waydo
xaaskaga taaso mararka qaar keenta xidhiidh xumo qoys.
Inagoo soo gaadhnay nuxurkii maqaalkeenan, warka fiicani waxa uu
yahay in xanuunkan looga dawoobi karo si aad u dhibyar.
Akhriste, hadii aad hore ugu tagtay dhakhtar oo uu kusoo qoray kiniinada awooda siiya ninka xiliga galmada ee ay ka midka yihiin, Viagra, creams, spray etc, waxaad ogaataa in xaaladu ay kasii darayso, waxa la isku
raacay in dhamaanba kiniinada noocaas ah ee tamarta siiya raga ay,yihiin qaar aan haba yaraatee waxba ka tarin xanuunankan biya baxa dagdaga ah.
Aqoonta iyo cilmiga lagama xishoodo maanta waxaynu soo qaadaneynaa qodobo muhiim ah waxaana ciwaan uga dhignay Naagaha ugu gus jecel Aduunka iyo calaamadaha lagu garto
1:Naagta cagaha weyn
2:Naagta salka ama barida u weyn
3:Naagta shaaribka ama faruurta ka dhidida
4:Naagta indha buurbuuran oo baararka waa weeyn
5:Naagta xaada badan.
ibta naaska hadii sidaan loo qaniino si xanta xanta xanteyn ah waxey ka daran tahay kintirka ha aqrin hadaad kacsi dhawdahay